Iza amin'ireo mpandraharaha finday no manana Internet haingana indrindra amin'ny 4G LTE? 🥇 Emulator.online ▷ 🥇
Any Italia, ny tambajotram-pifandraisana dia niatrika fiovana lehibe raha oharina tamin'ny lasa ary taorian'ny fampifangaroana teo anelanelan'ny roa amin'ireo mpikirakira Internet finday lehibe efatra, Wind sy telo, dia manana ny fidirana amin'ny sehatry ny mpandraharaha Iliad, izay ambany ny tahan'ny. manao fifaninanana goavana amin'ireo mpandraharaha nentim-paharazana hafa (mpampiasa mihoatra ny 3 tapitrisa ao anatin'ny herintaona sy tapany). Fa amin'ireo mpandraharaha rehetra ireo Iza amin'ireo no tokony hofidinao mifototra amin'ny hafainganan'ny fifandraisanao amin'ny Internet? Mora ny mandray ny fampanantenan-dison'ny dokam-barotra sy ny sary atolotry ny mpandraharaha (matetika diso) ary manondro ireo mpandraharaha diso ho an'ny tanànantsika na ho an'ny faritra onenanay.
Raha tena te hahalala isika izay mpandraharaha finday manana Internet haingana indrindra amin'ny 4G LTE Ao amin'ny faritra misy anay dia nahatratra ny torolàlana mety ianao: eto dia hasehonay anao ny fanandramana tsy miankina rehetra nataon'ny antoko fahatelo na ny mpampiasa ny mpandraharaha samy hafa mihitsy, mba hahafantaranao tsara raha misy fandrakofana tsara amin'ny arabe onenanay (tena ilaina manana hafainganam-pandeha tsara) ary inona ny hafainganana azontsika atao amin'ny mpandraharaha voafidy.
VAKIO IZAO: Rindrambaiko fitiliana tambajotram-pifandraisana finday
Ny mpandraharaha Internet haingana indrindra amin'ny LTE
Amin'ireto toko manaraka ireto dia hasehonay anao ny fanandramana ataon'ny antoko fahatelo hijerena ny hafainganan'ny fifandraisan'ny Internet amin'ny finday manerana ny firenena ary, ho an'ireo izay te hahalala ny hafainganan'ny tanàna na amin'ny arabe onenan'izy ireo dia hampiseho aminao ny fitaovana izahay afaka manao ny fitsapana tsy miankina, tsy mila mividy ny SIM aloha. Tamin'ny fotoana Ny teknolojia 4G LTE ihany no ho hitantsika, mbola tena miparitaka be ary afaka manome hafainganam-pandeha saika amin'ny toe-javatra rehetra (5G ihany no hitantsika amin'ny tanàna lehibe).
Fitsapana tsy miankina amin'ny vatana
Raha te hahafantatra avy hatrany isika hoe iza no mpandraharaha italiana tsara indrindra amin'ny hafainganana eo amin'ny tsipika finday, azontsika atao ny misintona sy mamakafaka ny PDF natolotry ny SpeedTest, izay manome isan-taona ny tambajotra finday haingana indrindra any Italia.
Araka ny tabilao sy ny angon-drakitra notaterin'ity fanadihadiana ity, ny tamba-jotra LTE haingana indrindra any Italia dia Rivotra miaraka amin'ny totalin'ny 43,92 (mpandresy tamin'ny loka Speedtest). Saika teboka 10 ao ambadika hitantsika TIM miaraka amin'ny teboka 32,95, ilíada miaraka amin'ny isa 31,34 sy rambony tsy ampoizina Vodafone, izay mahatratra ny fitsapana amin'ny isa 30,20 fotsiny. Mampiseho fahagagana maro ireo data ireo izay mandondona lohahevitra maro: Wind Wind no nitarika ary nandresy ny TIM (izay noheverina ho tsara indrindra tany Italia hatrizay) ary Vodafone dia nianjera mafy, ary nokapohin'i Iliad (ny fahatongavana farany) koa.
Mba hanamafisana ireo angona ireo sy handikana azy ireo tsara dia tokony handinika iray hafa isika vatana tsy miankina ho an'ny fitsapana haingana, izany hoe io OpenSignal (tompon'ny fampiharana malaza). Amin'ny alàlan'ny fidirana amin'ny pejin-tsary fakantsary malalaka dia afaka mijery ny faritra italiana lehibe izahay, mampitaha ny fandrakofana ataon'ny mpandraharaha rehetra amin'ny tanàna, tanàna manodidina ary ambanivohitra.
Amin'ny famakafakana tsara ireo tabilao, dia hitantsika fa tsara ny fahombiazan'ny Fastweb sy ny TIM amin'ny ankamaroan'ny tranga rehetra (indrindra ny any ambanivohitra), WindTre laharana faharoa amin'ny hafainganana amin'ny tanàna ary manjaka amin'ny faritra ambanivohitra ary Vodafone koa dia amin'ity tranga ity no mpandraharaha ratsy indrindra (raha toa ka esorina ireo faritra an-tanàn-dehibe any Lombardy sy Sisila). Tsy eo amin'ity sary ity ny mpandraharaha Iliad, tsy heverina ho andrana (mety ampidirina amin'ny ho avy izy io).
Ahoana no hizaha toetra ny tamba-jotra haingana
Izahay dia tsy te-hanaraka ireo sosokevitra fanandramana tsy miankina ary te-"hikasika" ny hafainganan'ny tambajotra ao amin'ny faritra misy anay na any an-trano? Amin'ity tranga ity dia mamporisika anao izahay hampiasa ilay rakotra sy sarintany hafainganam-pandeha atolotra an'i Nperf, azo jerena ao amin'ny tranonkala ofisialy.
Avy amin'ity tranokala ity dia ho ampy ny misafidy ny mpandraharaha hitsapana sy hanamarina ny fandrakofana ny tambajotra (LTE sy LTE Advanced) ary ny tena hafainganana natolotry ny fitsapana nataon'ny mpampiasa. Vantany vao nifidy ny mpandraharaha ianao dia kitiho Fandraisana amin'ny tambajotra na ny azy Hafainganana misintona Raha hisafidy izay fitsapana hotanterahina dia ampiasao ny sari-tany etsy ambany hahitanao ny tanàna, ny faritra na ny arabe izay onenanay na izay toerana tianay hizahana, ary koa ampiasao ny saha fikarohana izay hita eo ankavanan'ny haintany. Ity fitaovana ity dia mety ho tena ilaina ohatra raha mila mividy trano vaovao na hofan-trano isika, hahafahantsika manamarina ny mpandraharaha iza no tsara ary raha ilaina ny manova ny SIM nefa mitazona ny isa, toy ny hita ihany koa ao amin'ny torolàlana. Fomba hanatanterahana isa sy fanovana ny tolotra telefaona.
Azonao atao ny mampiasa fomba hafa ny fampiharana OpenSignal, maimaimpoana maimaim-poana ho an'ny Android sy iPhone.
Amin'ny alàlan'ny fametrahana an'ity rindranasa ity sy ny fanomezana fahazoan-dàlana ilaina rehetra dia hahafahantsika manamarina ny fandrakofana LTE sy ny hafainganam-pandehan'ny finday ho an'ny làlana sy faritra rehetra any Italia; hanohy, ny hany mila ataontsika dia ny manokatra ny menio eo ambany sari-tany, andraso ny fahitana ny toerana misy antsika dia tsindrio eo an-tampon'ny menio 2G / 3G / 4G rehetra, hamaha ny menio ahafahanao misafidy ny mpandraharaha finday hizaha toetra sy ny karazan-tamba-jotra (ho an'ity fitsapana ity dia mamporisika anao izahay hamela ilay entana fotsiny 4G).
Miaraka amin'ny fitsapana ataon'ny fikambanana mahaleo tena sy ny fitsapana izay azontsika atao amin'ny alàlan'ny solo-sainay na finday avo lenta, dia afaka mahita haingana ny mpandraharaha Internet tsara indrindra ho an'ny faritra misy antsika isika, mba hahafahantsika mivezivezy amin'ny hafainganam-pandeha farany ambony indrindra, nefa tsy tafiditra amin'ireo vela-pandrika sy doka izay Matetika mandeha amin'ny fahitalavitra na radio ireo mpandraharaha. Fitsapana mahaleo tena hoy Wind Tre no mpandraharaha finday tsara indrindra any Italia, saingy ity valiny ity dia tsy maintsy raisina am-pitandremana: tsara kokoa ny manamarina manokana ny fandrakofana ary mahazo antoka fa mifanaraka tsara ao an-tranontsika na any amin'ny birao izany.
Raha mitady tambajotra finday haingam-pandeha kokoa aza isika dia tsy maintsy hifantoka amin'ny 5G, izay mbola tsy dia miparitaka fa amin'ny ambaratonga avo kokoa noho ny 4G; raha te hahafantatra bebe kokoa dia afaka mamaky ny torolalana ho antsika Ahoana ny fanamarinana ny fandrakofana 5G.
Raha, mifanohitra amin'izay no tadiavinay, dia mitady fomba hanamarinana ny fandrakofana ny optic fibre ho an'ny tsipika raikitra, manoro anao izahay hamaky ny lahatsoratray Fandrakofana fibre ho an'ny TIM, Fastweb, Vodafon, WindTre ary ny hafa mi Optical Fibre tsara indrindra: jereo ny fandrakofana sy tolotra.
Ahoana ny fampiasana PC roa misy fampisehoana iray (HDMI switch)
Ahoana ny fomba hijerena ny Mediaset Play amin'ny fahitalavitra
Ahoana ny fomba hamafana cookies ao amin'ny Chrome, Firefox, Edge ary Safari
Ny SmartBands tsara indrindra, ara-toekarena ary miasa toy ny famantaranandro marani-tsaina
Ahoana ny fanovana horonantsary amin'ny TikTok
Ahoana ny fomba hamohana bootloader amin'ny Xiaomi